कांग्रेसमा कोइराला दाजुभाइ विभाजित - ebudhabar.com - Different taste of news, views & analysis.
कांग्रेसमा कोइराला दाजुभाइ विभाजित
काठमाडौं । तीनवटै तहको निर्वाचनमा लज्जास्पद पराजय बेहोरेपछि लगभग मूच्र्छित अवस्थामा पुगेको पुरानो पार्टी कांग्रेस अबको बाटो पहिल्याउन नसकेर झन् बिरानो यात्रीझैं बनेको छ । नेता रामचन्द्र पौडेल र प्रकाशमान सिंह गुटसँगै तेस्रो गुट कृष्णप्रसाद सिटौला गुट सभापति शेरबहादुर देउवालाई पराजयको दोष थुपरेर विशेष महाधिवेशनको दाउपेच गर्नमै व्यस्त छ । उता, देउवाले पौडेल र सिटौला समूहको लगातार आक्रमण परास्त गर्ने अर्जुनदृष्टि लगाइरहेका बेला कोइराला परिवार पछिल्लो एजेन्डामा विभाजित बनेको छ । कोइराला परिवारमा देखिएको यो विभाजनको फाइदा देउवालाई नै पुग्ने विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।
अहिले पनि कांग्रेस कृष्णप्रसाद कोइरालाको ज्येष्ठ सुपुत्र बीपी कोइरालाको विरासत हो भन्ने ठूलो पंक्ति कांग्रेसमा छ । कोइराला परिवारप्रति यति धेरै ठूलो पंक्तिले सहानुभूति राखिरहेको बेला बीपीपुत्र शशांक कोइराला र केशवपुत्र डा. शेखर दुई ध्रुवमा देखिएका छन् । देउवाको असक्षमतामाथि कडा प्रहार गर्दै शेखर पार्टी बचाउन तत्काल विशेष महाधिवेशनमा जानुको विकल्प नरहेको वकालत गरिरहेका छन् । उता, महामन्त्रीसमेत रहेका डा. शशांक भने नेतृत्वलाई प्रहार गर्नेभन्दा अहिलेको पराजयको जिम्मेवारी सबैले लिएर कांग्रेस पुनर्जागरण अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।
साइनोमा शेखर शशांकको दाजु हुन् । तर यी दुई दाजुभाइ कांग्रेसको अहिलेको मामिलामा फरकफरक कित्तामा उभिएपछि जुँगाको लडाइँ सुरु भएको नेताकार्यकर्ता पंक्तिले अनुभूति गर्न थालेका छन् । केही दिनअघि शशांकले आफू भावी सभापतिको दाबेदार हुने बताएपछि नयाँ तरंग फैलिएको छ । गिरिजापुत्री सुजाता कोइरालासँग पनि परामर्श नगरी शशांकले नयाँ अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेपछि कांग्रेसभित्र कोइराला परिवारभित्र नेतृत्वका लागि जुगाँको लडाइँ सुरु भएको अनुमान गरिएको छ । चुनावमा पराजय बेहोरेपछि नेतृत्वसँग चिढिएका शेखरको स्वर पौडेल र सिटौला समूहसँग मिलेको छ । यता, शशांकले भने घुमाउरो तरिकाले देउवाको लाइन समाएका छन् । त्यसो त देउवालाई चिढ्याउनेभन्दा नजिक रहेरै नेतृत्व हातमा आउने विश्वास शशांकमा देखिएपछि दुई दाजुभाइको लडाइँ अबको दिनमा सतहमै आउने अनुमान गर्न थालिएको छ ।
पार्टीमा बलिया देउवा भ्रातृ संगठनमा कमजोर
पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा बलियो पकडमा रहेका सभापति देउवा पछिल्ला दिनमा केही भ्रातृ संगठनहरूमा भने कमजोर बन्दै गएका छन् । पछिल्लो समय अधिवेशन भएका कांग्रेसका शुभेच्छुक संस्थाहरूमा देउवा पक्ष अल्पमतमा परेको हो । नेपाल शिक्षक संघ हुँदै संस्थापन पक्ष पछिल्लोपटक नेपाल प्रजातान्त्रिक इन्जिनियर्स एसोसिएसनको अधिवेशनमा पराजित हुन पुगेको छ ।
प्रजातान्त्रिक इन्जिनियर्स एसोसिएसनको अधिवेशनमा संस्थापन पक्षका उम्मेदवार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्लेलाई पराजित गर्दै नेता रामचन्द्र पौडेल समूहका शंकरप्रसाद पण्डित विजयी बनेका छन् । १५ सदस्यीय कार्यसमितिमा पाँच पदाधिकारी र नौ सदस्य पण्डित समूहले जितेको छ ।
त्यस्तै, नेपाल सार्वजनिक कर्मचारी संघको ४१ सदस्यीय कार्यसमितिमा संस्थापन पक्षका दुई जना मात्र निर्वाचित भएका छन् । हालै सम्पन्न अधिवेशनमा पौडेल पक्षका जनार्दन भट्टराईले देउवा पक्षका मणिल ओझालाई पराजित गरे । त्यस्तै, वित्तीय कर्मचारी संघको अधिवेशनमा पनि संस्थापन पक्ष पराजित भएको छ । अधिवेशनबाट पदमराज रेग्मीले संस्थापन पक्षका उम्मेदवार रमेश रावललाई पराजित गरेका छन् । संघको अध्यक्ष, उपमहासचिव, कोषाध्यक्ष र खुला सदस्यका सबै पदमा पौडेल समूहका उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन् ।
त्यसअघि अधिवेशन भएका नेपाल शिक्षक संघ र नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनमा पनि संस्थापन पक्षका उम्मेदवार पराजित भएका थिए ।